Manjaro 21.0.2 inouya nePlasma 5.21.4 uye zvimwe zveGNOME 40 maapps | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 21.0.2 inouya nePlasma 5.21.4, pamwe neGNOME 40 yakagadziridzwa maapplication uye nekukurumidza maseva kurodha iyo ISO
Havana kutora nguva yakareba kuti vatange vhezheni nyowani yechinhu chakatsiga Chishanu chapfuura vakatipa iyo ISO yakaverengerwa 210409, uye pakati pezvakakosha zvataive nazvo kuti vakatanga kushandisa iyo GNOME 40 kunyorera, asi ivo vakachengeta yavo Shell muGNOME 3.38. Yakanga iriwo nhau pakati peavo vedu vakaedza kurodha pasi mufananidzo kuti maseva ainonoka, zvekuti akasvika kumaawa gumi. Nhasi, timu yekuvandudza yaburitsa Manjaro 21.0.2, uye kudzivirira matambudziko ivo vasvika chibvumirano neCDN77.
Ino nguva, iyo edition iyo yakagashira yakanyanya nhau yanga iri KDE, sezvo iyo Plasma uye Sisitimu yemhando dzakashandurwa kune ichangoburwa yeKDE Project. Ivo zvakare vanotaura kuti ivo vakagadziridza mamwe mafomu kuGNOME 40, asi ivo vacharamba vachigara muGNOME 3.38 Shell kudzamara vaona maitiro ekuita kuti zvese zvishande zvakakwana muGNOME 40, pakati payo zvakare iri danho rekuti ungaishandisa sei. Heano ma nhau dzakatanhamara izvo zvasvika neManjaro 21.0.2.
Pfungwa dzeManjaro 21.0.2
Yakagadziridzwa kernel vhezheni.
Mamwe mafomu akagadziridzwa kuGNOME 40. Ivo havataure chero chinhu nezveShell, saka zuva chairo rekusvika kwaro muStable vhezheni harizivikanwe.
Xorg-Server 1.20.11. Zvidziviriro zvekuchengetedza zvakawedzerwa mune ino gadziriso.
Plasma 5.21.4 uye Masystems 5.81 mune iyo KDE edition.
Mazhinji mapakeji eKDE-Dev akagadziridzwa.
Zvimwe zvinogadziridzwa zvenguva dzose, zvinosanganisira Python naHaskell.
Manjaro 21.0.2 ikozvino iripo seyekuvandudzwa kwevashandisi varipo, uye epamutemo edhisheni neXFCE, GNOME, uye Plasma desktops inogona kutorwa pasi kubva Iyi link. Sezvatakambotaura, ivo vakachinja iyo yekutambira sevhisi kuti vadzivise matambudziko nekutora kweiyo vhezheni yakaburitswa mazuva gumi apfuura hatizive kana vachizoshanda nesevhisi yapfuura zvakare. Chinhu chega chechokwadi ndechekuti izvozvi zvese zviri kufamba nekukurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 21.0.2 inouya nePlasma 5.21.4, pamwe neGNOME 40 yakagadziridzwa maapplication uye nekukurumidza maseva kurodha iyo ISO
LLVM 12.0 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo